ट्रेडमार्कमै सीमित नेपाली कम्युनिस्ट - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१७ पुस २०७४, सोमबार ११:२१ January 1, 2018 Nonstop Khabar
महाभारतमा एउटा प्रसंग छ– राजगुरु भएर पनि द्रोणाचार्यले छोरा अश्वस्थामाको दूध पिउने इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन्। बालहठले पराजीत पिताश्रीले दानको चामल पिसेर पियाउनै लाग्दा कुरु बालकहरूले अश्वस्थामालाई गिज्याउँदै भनेछन्– हे गरूपुत्र! तिमीले पिइरहेको त दूध हैन्, चौलानी पो हो । हे…सखा, हरेक सेतो पदार्थ दूध कहाँ हुन्छ र? त्यस्तै नाम राख्दैमा नामअनुसारकेै गुण हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन्। समाजमा हामीले धनबहादुर, सुन्दरलाल, गरिबदास अनेकौं देख्छौं। ती नामअनुसारको अवस्था र कर्ममा भने हुँदैनन्। त्यस्तै व्यक्तिका रूपमा कोही कम्युनिस्ट भए तापनि संगठनात्मकरूपमै नेपालमा भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टी छैनन्।
नाममा (डि जुरे) जे रहे पनि काममा (डि फ्याक्टो) भने ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ छैनन् र रहेनन्। ट्रेडमार्ककै रूपमा रहेर राजनीतिक व्यवसाय भने सबैको चलेकै छ। हरेक पार्टीलाई रूप र गुणकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। उसका दर्शनआधारित विचार त्यसैअनुरूप संगठनका मूल्य, मान्यता, सांस्कृतिक आचरण र सक्रियता छन् कि छैनन् भनेर नियाल्ने गरिन्छ। नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट आकर्षणको ठूलो हिस्सा छ। पहिलो संविधान सभामा त झण्डै ६३ प्रतिशत समर्थनमा मतदान नै भएको थियो। त्यसैले गुणमा नभई रूपमा मात्रै भए पनि मार्क्सवादी बन्नु र स्वीकार्नु ‘नेपाली कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको बाध्यता हो।
लोकतान्त्रिक नजरबाट नियाल्दा नेपालका हरेक पार्टी नै ‘वान म्यान मेनिफेस्टो’ मा फेरिएका छन्। अझ ‘माओवादी’ र एमालेका कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्ने ऊर्जा भनेको त एकअर्काप्रति कति उग्रघृणा कोरल्न, उछित्तो काढ्न र हुर्मत लिन सकिन्छ भन्नेमा देखिन्छ। भद्दा रछ्यान त मिडिया त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल बनेका छन्। इतिहासको अनिवार्यता ‘माओवादी’ विरुद्धको उग्रप्रतिक्रिया स्वाभाविकै हो। युद्धले स्थानियलाई यति धेरै प्रभावित पारेको हुन्छ कि त्यो एक अर्को पुस्तासम्म पनि घटनाका कथा बनेर पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ। विपक्षहरू त्यही अंशमा खेलेर समग्रतामा आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्।
प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार परेका आचार्य र श्रेष्ठ रिहा